(Warbixin) Booqashada Farmaajo ee Qatar ma dhaawacaysaa moowqifkii dhexdhexaadnimada? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(Warbixin) Booqashada Farmaajo ee Qatar ma dhaawacaysaa moowqifkii dhexdhexaadnimada?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan kasoo laabtay safar shaqo oo rasmi ah oo uu ku tagay dalka Qatar, halkaas oo kulan kula qaatay amiirta dalkaas Sheekh Tamiin Binu Xamad Al Taani, heshiisyana kula soo saxiixday.
Booqashadan ayaa waxa ay kusoo hagaagtay xilli ay jiraan xiisado siyaasadeed oo ka dhashay khilaafka dalalka Khaliijka, kaas oo kusoo muusay Soomaaliya.
Shirkii dhawaan Baydhabo ay ku yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ayay ku sheegeen in ay dowladda Soomaaliya la jirsatay dhinac ka mid ah kuwa isku haya arrimaha Khaliijka, iyaga oo walaac ka muujiyay xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dalalka Imaaraatka iyo Sucuudiga.
Mar sii horeysay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa si qayaxan dowladda federaalka ugu eedeeyey in ay ka baxday dhexdhexaadnimadii, islamarkaasna ay la safatay dowladda Qatar.
Haddabe safarkan uu madaxweynaha kaga soo laabtay Qatar maxaa loo fasiran karaa?
Saraakiisha Villa Soomaaliya qaarkood oo aan wax ka weeydiinay eedeymaha loosoo jeediyay ayaa iska fogeeyay, waxayna sheegeen in safarkan uusan ka duwanayn kuwii hore ee madaxweynaha uu ku tagay dalalka kale ee Khaliijka.
Tusaale safarkii koowaad waxa uu madaxweynaha ku tagay dalka Sucuudiga, dalka Imaaraatka waxa uu booqday 2 jeer, halka dalka Masarna uu booqasho ku tagay labo jeer.
“Soomaaliya waxa ay u furantahay cid kasta oo maalgashi iyo waxtar u haysa, mana jirto cid aan si gaar ah ula socono” ayuu yiri mas’uul sare oo Villa Soomaaliya ka tirsan, kaas oo balse magaciisa ka gaabsaday markii ay la xiriirtay BBC-da.
Madaxtooyada waxa ay isweeydiinaysaa sababta dhexdhexaadnimada dalalka Suudaan iyo Moroco iyo kuwa kale aysan shaki ugu jirin, balse tan Soomaaliya tuhun loo galinayo, islamarkaasna loogu riixayo in ay dhinaca Sucuudiga iyo Imaaraatka la jirsato.
Malaha jawaabtaas waxaa haya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laftiisa oo dhawr jeer oo kala duwan ka hadlay meelo fagaarayaal ah, wuxuuna sheegay in xaaladda faqrinimo iyo burburka dowladnimo ee ku dhacay Soomaaliya aysan ka dhignayn in dowladda ay iibinayso go’aanadeeda masiiriga ah iyo madaxbanaanida dalka.
Sidaasi oo ay tahay waxaa jira dadaalo laga dhex wado Soomaaliya iyo Imaaraatka, kuwaas oo uu ku lug leeyahay madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi, sida ay qoraha maqaalkan u xaqiijiyeen illo wareedyo lagu kalsoonyahay.
Maxaa laga faa’iiday safarkii Qatar ee Madaxweynaha?
Labada hoggaamiye oo kalmad isweeydaarsanaya xilli wasiiradda dumarka ah ay heshiis caafimaad saxiixayaan
Sida ka muuqatay wararkii iyo muuqaaladii ay faafinayeen warbaahinta labada dal, madaxweyne Farmaajo waxa uu la kulmay soo dhaweyntii ugu balaarnayd.
Wax kasta oo halkaas ka dhacay waxa ay muujinayeen labo dal iyo labo hoggaamiye oo isku qaba kalsoonida weyn iyo saaxiibtinimo ixtiraam ku dhisan.
Lama wada oga waxyaabaha ay ka wada hadleen hoggaamiyeyaasha labada dal, balse waxyaabihii koobnaa ee warbaahinta lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah heshiis ay kala saxiixdeen labada dumar ah ee wasiirada ka ah wasaaradaha caafimaadka labada dal, Dr Foowsiyo Abiikar Nuur iyo Dr Xannaan Maxamed Al Kuwaari.
Heshiiska ayaa waxa uu dhigayaa in Qatar ay Soomaaliya gacan ka siiso dhismaha kaabayaasha caafimaadka, kuwaas oo u kala qeybsama arrimaha ay ka mid yihiin la tacaalista masiibooyinka dabiiciga, tabobarista shaqaalaha caafimaadka, iyo waliba arrimaha cilmi-baarista caafimaadka.
Waftiga madaxweynaha waxaa qeyb ka ahaa wasiirka gaadiidka badda iyo dekedaha, waxaana jiray is faham laga gaaray arrimaha dhabayaasha gaadiidka kala duwan, balse ma jiraan wax la shaaciyay oo faahfaahin ah.
Mid ka mid ah arrimaha Imaaraatka iyo dowladda federaalka ay isku qabteen ayaa waxaa ka mid ah heshiis dekedo ku saabsan oo ay Imaaraatku la saxiixdeen qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira iyaga oo aanan soo marin dowladda dhexe.
Waxaa kale oo safarka madaxweynaha qeyb ka ahaa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah mudane Jamaal Maxamed Xasan, kaas oo la sheegay in uu gacanta ku hayo wax ka badan qorshayaasha 100 mashruuc oo laga hirgalinayo guud ahaan dalka, kuwaas oo la waafajinayo kaalmooyinka ay dalalka shisheeye u fidinayaan Soomaaliya.
“Dhammaan dalalkii uu booqday madaxweynaha, Turkiga iyo Qatar kuwa kaga waxtar badan Soomaaliya wali maanan soo arag, dhammaan kuwa kale lacago caddaan ah ayay yaboohayaan, balse labadan dal mashaariic bulshada wax ku ool u ah ayay diyaar la yihiin, waxayna u arkaan in horumarka Soomaaliya iyo kooda uu isku xiranyahay” ayuu yiri mas’uulka madaxtooyada Soomaaliya.
Dood taa ka duwan waxaa qaba dowlad goboleedyada Soomaaliya oo sheegay in dowladda Imaaraatka ay taalo hantidii Soomaalida oo dhan, uu ku xiranyahay ganacsiga, gaar ahaan xawaaladaha oo xarumaha ugu waaweyn ku leh Dubai, taas oo ay ku tiirsantahay nolosha malaayiin Soomaali ah. Waxa ay ku doodayaan in ay daw tahay in xiriirka loo wanaajiyo Imaaraatka.
Golaha iskaashiga maamul goboleedyada waxa sidoo kale ay ay war saxaafadeedkoodii dhawaan ku sheegeen in dowladda federaalka ay tahay in ay dowladda raacdo qodobka 53aad ee dastuurka, kaas oo ka hadlaya in waxyaabaha quseeya masiirka dalka laga talo galiyo dowlad goboleedyada, balse dowladda federaalka waxa ay dhankeeda cuskanaysaa qodob kale oo siinaya awood in ay iyadu leedahay go’aanka arrimaha ku saabsan dibedda iyo difaaca iyo kuwa kale.